बिजनेस Archives – Page 33 of 85 – newslinesnepal
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई हुनु भनेको मुलुक आर्थिक समृद्धिमा पछि पर्नु
काठमाडौं, २८ मंसिर । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई हुनु भनेको मुलुक आर्थिक समृद्धिमा पछि पर्नु निश्कर्ष निकालिएको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बारा जिल्लाको निजगढमा प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा फाष्टट्रयाक एअरपोर्ट निर्माण मूल…
मनमुरि कृषि सहकारी संस्था पाँचौ औ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं मंसिर २८,मनमुरि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड को पाँचौ औ वार्षिक साधारण सभा आज एक कार्यक्रमका बीचमा संस्था को कार्यलय कागेश्वरी ८ मनोहरा सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा बेलपत्र अर्गानिक फार्म की प्रमुख मायाँ गाैतम को…
काठमाडौँ, मङ्सिर २६ । साताको अन्तिम दिन धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से ११.१७ अङ्कले बढेर एक हजार १७२.६४ पुगेको छ ।…
काठमाडौँ – नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड दुई सातासम्म दिउँसोमा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आज बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले मङ्सिर २७ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई साताका लागि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३…
के छ आज नेपाली बजारमा सुनचाँदी को भाउ?
काठमाडौँ । बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । बुधबार छापावाल सुन तोलामा ७० हजार ८०० मा कारोबार भएको छ भने तेजावी सुन तोलामा ७० हजार ५०० मा कारोबार भएको छ । यस्तै…
ललितपुर, २४ मङ्सिर -ललितपुर महानगरपालिका ०५ नंबर वडाका अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठले 'हिंसात्मक ब्यवहारको अन्त्य नै सभ्य समाजको निर्माणका कडि भएको बताएका छन् । लैङिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने क्रममा ललितपुर ०५ नंबर…
नेप्से परिसुचक लगातार तीन दिनदेखि उकालो
काठमाडौं, मंसिर २४ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचक लगातार तीन दिनदेखि उकालो लागेको छ। यो साता कारोबारको पहिलो आइतबार ३ दशमलव ४५ अंकले बढेको परिसुचक सोमबार १३ दशमलव ५१ अंकले बढेको थियो। मंगलबार २…
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर : साताको दोस्रो दिन आज पनि नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आइतबार प्रतितोला रु ५०० ले घटेको सुनको मूल्य आज पनि प्रतितोला रु २०० ले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी…
के छ आज नेपाली बजारमा सुनचाँदी को भाउ ?
काठमाडौं ।नेपाली बजारमा आइतबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । शुक्रबार तोलामा ७१ हजार ७०० मा कारोबार भएको छापावा सुनको मूल्य आइतबार ७१ हजार २०० मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसैगरी…
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलद्धारा बहुप्रतिक्षित स्काई वाक टावरको शिलान्यास
मंसिर २२,काठमाडौँ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सपना नदेख्ने जो कोहीले मानिसले मुलुकको विकास र समृद्धिलाई गति दिन नसक्ने बताउँदै मुर्छित सपनालाई जागृत गर्न आम नेपाली युवाहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । वन्डर्स नेपालले…